Rugby à VII – «Tournoi de l’océan Indien»: hanainga, anio ho atsy La Réunion, ny Makis de Madagascar | NewsMada
Rugby à VII – «Tournoi de l’océan Indien»: hanainga, anio ho atsy La Réunion, ny Makis de Madagascar
Araka ny efa fantatra, anisan’ireo ekipa hiatrika ny lalao « Tournoi de l’océan Indien » taranja rugby lalaovin’olona fito ny Makis an’i Madagasikara. Lasa nihazo an’i La Réunion, anio, ny delegasiona malagasy rehefa avy nangata-tsodrano tamin’ny minisitra, i Tinoka Roberto, omaly.
Vonona ny hibata fandresena ny ekipa malagasy! Io ny fanomezan-toky nataon’ireo mpilalao teny amin’ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena, Ambohijatovo, omaly, sady nangata-tsodrano tamin’andrimatoa minisitra ihany koa izy ireo. Tetsy ankilany, nanambara ny minisitra, i Tinoka Roberto, fa efa tapitra ny fotoana namelana ny mpanao fanatanjahantena ho irery sy tsy misy mpiahy. Fotoana izao, hoy izy, hanohanana tanteraka ny atleta malagasy. Ankoatra ny tsodrano nomen’ny minisitra ireto ekipan’ny Makis, rugby à VII, ireto, nanolotra valopy ho vatsin-dalana ho azy ireo ihany koa izy. Vola mitentina 200 000 Ariary isan’olona, izany hoe, 50 euros avy, ny natolony nandritra izany. “Vatsin-dalana ihany io”, hoy andriamtoa minisitra, fa “mbola misy ny fanomezana manokana, indrindra raha mitondra amboara miverina eto an-tanindrazana ny ekipa Malagasy”.
Tsahivina fa natao indrindra ho fanomanana ny lalao iraisam-pirenena handraisan’ny Malagasy anjara ity “tournoi” any La Réunion ity. “Miezaka ny eo anivon’ny federasiona malagasy ny taranja rugby mitady lalao matihanina ho an’ny ekipa malagasy hahafahana manomana antsakany sy andavany ny “Lalaon’ny Nosy” sy ny “Lalao afrikanina” hatrehina ato ho ato. Isaorana ny minisitera manohana anay sy ny mpilalao rugby malagasy fa tsapa tokoa fa tsy irery ireo tanora mitondra avo ny voninahi-pirenena miatrika lalao goavana toy izao”, raha nanamafy ny filohan’ny Malagasy Rugby, Rakotomalala Marcel.
Tsara ny manamarika fa miisa 17 ny mandrafitra ny delegasiona malagasy hiatrika ity lalao any La Réunion ity, tarihin’ny tale teknika nasionaly, Randrianorosoa Antso, ny mpanazatra sy ny mpitsabo ary ireo mpilalao miisa 14. Ny alahady 17 febroary izao no hifarana ity fifaninanana ity.